October 1, 2021 – Shwe Myanmar
“မိဘကိုခဈြတာ မရှကျပါနဲ့” အားမငယျသငျ့တာကို အားမငယျပါနဲ့”
အလယ်တန်း အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ကျောင်း
တက်ရင် အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ်
” နင့်အဖေ ဘာလုပ်လဲ နင့်အမေ ဘာလုပ်လဲ ” လို့ မေးရင်
ကျွန်မအရမ်းအားငယ်ရတယ် ဝမ်းနည်းမိတယ်” ငါရဲ့ဖေဖေက
စက်ချုပ်တယ် ငါ့ရဲ့မေမေက ထမင်းချက်တယ် ” ဆိုတဲ့ အဖြေကို
မရဲမဝဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖြေခဲ့ရတယ်။
( ” ငါ့ဖေဖေက အင်ဂျင်နီယာ ငါ့မေမေက ဒေါက်တာ ” ဆိုပြီး
တချို့သူငယ်ချင်းတွေလို ဂုဏ်ယူဝဲ့ကြွားစွာ ဖြေချင်မိတယ် )
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အဖေက စက်ချုပ်တယ် အမေက ထမင်းချက်
တယ်။တနေ့တော့ ” ဖေဖေ သမီးကိုလေ သူငယ်ချင်းတွေက မေ
းကြတယ် ဖေဖေမေမေက ဘာလုပ်တာလဲ ” တဲ့ ဖြေတော့ တချို့သူ
တွေက သမီးကို လှောင်ရယ်ကြတယ် ” သမီး သိပ်ရှက်တယ်
” သမီးလဲ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အဖေအမေလို အင်ဂျင်နယ်ယာ
ဒေါက်တာ ပညာတတ်တဲ့ ဖေဖေမေမေ လိုချင်တာပေါ့ ”အဲဒီ
အချိန်မှာ ကျွန်မအနားသို့ ဖေဖေတိုးလာပြီး
ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ သမီးရေ ဖေဖေတို့လည်း ပညာတတ်
ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့ ဘဝပေး အခြေအနေက ဖေဖေကို ပညာတတ်ဖြစ်
ဖို့ မပေးခဲ့ဘူးလေ ”
” ဖေဖေတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ ပညာတတ် သိပ်ဖြစ်ချင်
ခဲ့တာ ” အမေကမုဆိုးမ ဆင်းရဲတယ် သူများဆီမှာ အငှားခံ
ရတယ် စားဝတ်နေရေးအတွက်ပဲ ထမင်းမငတ်အောင် စားခဲ့ရတာ ”
” ဖေဖေတို့ကို ကျောင်းတက်ဖို့ ဖတ်စာအုပ်တွေ ဗလာစာအုပ်တွေ
” ဖေဖေတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်က စာအရမ်းသင်ချင်လို့
တောင်ပေါ်က ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို သွားခူးပြီးရောင်းတယ် ”
” ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းလို့ ရတဲ့ပိုက်ဆံကို စု သူများဆီက တ
ဆင့် စာအုပ်အဟောင်းလေးတွေဝယ်ပြီးဖေဖေတို့ မောင်နှမနှစ်
ယောက် ကျောင်းတက်ခဲ့ရတာ ” ” ဖေဖေတို့က ဆင်းရဲတော့
ဘယ်သူကမှ ဂရုမစိုက်ကြဘူး သမီးရေ ”
” စာအုပ်အသစ်တွေ မဝယ်နိုင်ဘူး သူများဆီကဝယ်တဲ့ စာအုပ်
အဟောင်းလေးနဲ့ စာရေးခဲ့တယ် ”
ဆရာကို အမှတ်ခြစ်ဖို့ စာအုပ်သွားထပ်တော့ ” မင်းဘာစာအုပ်နဲ့
ရေးထားတာလဲ ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ် သတ်နေတာပဲ ရော့ ကွာ ” ဆို
ပြီး ဖေဖေ့စာအုပ်ကို ဆရာက လွှင့်ပစ်တယ်သမီးရေ
” စာအုပ်ကထဲက စာရွက်လေးတွေ တရွက်စီကွာကြသွားခဲ့တယ်
ဖေဖေလည်း အရမ်းရှက်လို့ ငိုပြီးစာရွက်လေးတွေကို တရွက်
ချင်းစီ ကောက်ခဲ့ရတယ် ”
အဲဒါနဲ့ ဖေဖေ လေးတန်းဖြေပြီး ကျောင်းနားခဲ့ရတယ် သမီးရေ ”
အရွယ်ရောက်လာတော့ ဖေဖေစက်ချုပ်ပညာကို တတ်ကျွမ်း
အောင် ဆရာတယောက်ဆီမှာ သင်ခဲ့တယ် ”
” သမီးတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို ဖေဖေတို့ မောင်နှမ
နှစ်ယောက်လို မဖြစ်ရလေအောင် ဖေဖေတတ်တဲ့ စက်ချုပ်ပညာ
နဲ့ ပညာတတ်ဖြစ်အောင် ပညာသင်ရအောင် ကျောင်းတက်
ရအောင် ထားပေးတယ် ” လေ
ဖေဖေပြောတဲ့စကားတွေကို နားထောင်ရတာတော့ ကျွန်မရင်ထဲ
ဝမ်းနည်းပြီး မျက်ရည်စက်တွေ ကျလာယ်ဖေဖေက စကားတခွန်း
ပဲပြောတယ် ” ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ သမီးရေ … မရှက်ပါနဲ့ ငါ့
မိဘတွေက သူတို့တတ်တဲ့ အတတ်ပညာ ရှာလို့ပေးလို့ ရတဲ့
ပိုက်ဆံနဲ့ ငါ့အစ်ကိုကို ဘွဲ့ရအောင် ကျောင်းထားပေးခဲ့တယ်
ငါ့ကို အခုကျောင်းထားပေးနေတယ် ဆိုပြီး ပြောလိုက်စမ်းပါ သမီး
ရေ ” တဲ့လေ ။တချိန်က မပြောနိုင်ခဲ့တဲ့စကားတွေကို အခုတော့
ဖေဖေ့ကျေးဇူးတွေကြောင့် ရဲဝဲ့စွာပြောနိုင်ခဲ့ပြီ ဖေဖေ
သမီး မရှက်တော့ဘူး ဖေဖေ ” သူငယ်ချင်းတို့ မိတ်ဆွေတို့ရေ
” ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ စဉ်းစားဉာဏ် အတွေးအခေါ်
ဗဟုသုတ မရှိသေးတဲ့ အရွယ်မို့ ရှက်တတ်ရင်ရှက်နိုင်ပါတယ်
အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ စဉ်းစားဉာဏ် အတွေးအခေါ် ဗဟုသုတ
တွေကို ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ မရှက်သင့်တာကို မရှက်ပါနဲ့
အလယျတနျး အထကျတနျး ကြောငျးသူဘဝတုနျးက ကြောငျး
တကျရငျ အတနျးဖျော သူငယျခငျြးတှကေ မေးကွတယျ
” နငျ့အဖေ ဘာလုပျလဲ နငျ့အမေ ဘာလုပျလဲ ” လို့ မေးရငျ
ကြှနျမအရမျးအားငယျရတယျ ဝမျးနညျးမိတယျ” ငါရဲ့ဖဖေကေ
စကျခြုပျတယျ ငါ့ရဲ့မမေကေ ထမငျးခကျြတယျ ” ဆိုတဲ့ အဖွကေို
မရဲမဝဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ဖွခေဲ့ရတယျ။
( ” ငါ့ဖဖေကေ အငျဂငျြနီယာ ငါ့မမေကေ ဒေါကျတာ ” ဆိုပွီး
တခြို့သူငယျခငျြးတှလေို ဂုဏျယူဝဲ့ကွှားစှာ ဖွခေငျြမိတယျ )
ဒါပမေယျ့ ကြှနျမ အဖကေ စကျခြုပျတယျ အမကေ ထမငျးခကျြ
တယျ။တနတေ့ော့ ” ဖဖေေ သမီးကိုလေ သူငယျခငျြးတှကေ မေ
းကွတယျ ဖဖေမေမေကေ ဘာလုပျတာလဲ ” တဲ့ ဖွတေော့ တခြို့သူ
တှကေ သမီးကို လှောငျရယျကွတယျ ” သမီး သိပျရှကျတယျ
” သမီးလဲ သူငယျခငျြးတှရေဲ့အဖအေမလေို အငျဂငျြနယျယာ
ဒေါကျတာ ပညာတတျတဲ့ ဖဖေမေမေေ လိုခငျြတာပေါ့ ”အဲဒီ
အခြိနျမှာ ကြှနျမအနားသို့ ဖဖေတေိုးလာပွီး
ဘယျလိုပွောလိုကျတာလဲ သမီးရေ ဖဖေတေို့လညျး ပညာတတျ
ဖွဈခငျြခဲ့တာပေါ့ ဘဝပေး အခွအေနကေ ဖဖေကေို ပညာတတျဖွဈ
ဖို့ မပေးခဲ့ဘူးလေ ”
” ဖဖေတေို့ မောငျနှမနှဈယောကျဟာ ပညာတတျ သိပျဖွဈခငျြ
ခဲ့တာ ” အမကေမုဆိုးမ ဆငျးရဲတယျ သူမြားဆီမှာ အငှားခံ
ရတယျ စားဝတျနရေေးအတှကျပဲ ထမငျးမငတျအောငျ စားခဲ့ရတာ ”
” ဖဖေတေို့ကို ကြောငျးတကျဖို့ ဖတျစာအုပျတှေ ဗလာစာအုပျတှေ
” ဖဖေတေို့ မောငျနှမနှဈယောကျက စာအရမျးသငျခငျြလို့
တောငျပျေါက ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို သှားခူးပွီးရောငျးတယျ ”
” ဟငျးသီးဟငျးရှကျရောငျးလို့ ရတဲ့ပိုကျဆံကို စု သူမြားဆီက တ
ဆငျ့ စာအုပျအဟောငျးလေးတှဝေယျပွီးဖဖေတေို့ မောငျနှမနှဈ
ယောကျ ကြောငျးတကျခဲ့ရတာ ” ” ဖဖေတေို့က ဆငျးရဲတော့
ဘယျသူကမှ ဂရုမစိုကျကွဘူး သမီးရေ ”
” စာအုပျအသဈတှေ မဝယျနိုငျဘူး သူမြားဆီကဝယျတဲ့ စာအုပျ
အဟောငျးလေးနဲ့ စာရေးခဲ့တယျ ”
ဆရာကို အမှတျခွဈဖို့ စာအုပျသှားထပျတော့ ” မငျးဘာစာအုပျနဲ့
ရေးထားတာလဲ ညဈပတျစုတျပွတျ သတျနတောပဲ ရော့ ကှာ ” ဆို
ပွီး ဖဖေစေ့ာအုပျကို ဆရာက လှငျ့ပဈတယျသမီးရေ
” စာအုပျကထဲက စာရှကျလေးတှေ တရှကျစီကှာကွသှားခဲ့တယျ
ဖဖေလေညျး အရမျးရှကျလို့ ငိုပွီးစာရှကျလေးတှကေို တရှကျ
ခငျြးစီ ကောကျခဲ့ရတယျ ”
အဲဒါနဲ့ ဖဖေေ လေးတနျးဖွပွေီး ကြောငျးနားခဲ့ရတယျ သမီးရေ ”
အရှယျရောကျလာတော့ ဖဖေစေကျခြုပျပညာကို တတျကြှမျး
အောငျ ဆရာတယောကျဆီမှာ သငျခဲ့တယျ ”
” သမီးတို့ မောငျနှမနှဈယောကျကို ဖဖေတေို့ မောငျနှမ
နှဈယောကျလို မဖွဈရလအေောငျ ဖဖေတေတျတဲ့ စကျခြုပျပညာ
နဲ့ ပညာတတျဖွဈအောငျ ပညာသငျရအောငျ ကြောငျးတကျ
ရအောငျ ထားပေးတယျ ” လေ
ဖဖေပွေောတဲ့စကားတှကေို နားထောငျရတာတော့ ကြှနျမရငျထဲ
ဝမျးနညျးပွီး မကျြရညျစကျတှေ ကလြာယျဖဖေကေ စကားတခှနျး
ပဲပွောတယျ ” ဂုဏျယူလိုကျစမျးပါ သမီးရေ … မရှကျပါနဲ့ ငါ့
မိဘတှကေ သူတို့တတျတဲ့ အတတျပညာ ရှာလို့ပေးလို့ ရတဲ့
ပိုကျဆံနဲ့ ငါ့အဈကိုကို ဘှဲ့ရအောငျ ကြောငျးထားပေးခဲ့တယျ
ငါ့ကို အခုကြောငျးထားပေးနတေယျ ဆိုပွီး ပွောလိုကျစမျးပါ သမီး
ရေ ” တဲ့လေ ။တခြိနျက မပွောနိုငျခဲ့တဲ့စကားတှကေို အခုတော့
ဖဖေကြေ့ေးဇူးတှကွေောငျ့ ရဲဝဲ့စှာပွောနိုငျခဲ့ပွီ ဖဖေေ
သမီး မရှကျတော့ဘူး ဖဖေေ ” သူငယျခငျြးတို့ မိတျဆှတေို့ရေ
” ငယျတဲ့အခြိနျမှာတော့ စဉျးစားဉာဏျ အတှေးအချေါ
ဗဟုသုတ မရှိသေးတဲ့ အရှယျမို့ ရှကျတတျရငျရှကျနိုငျပါတယျ
အသကျအရှယျကွီးလာလို့ စဉျးစားဉာဏျ အတှေးအချေါ ဗဟုသုတ
တှကေို ရငျ့ကကျြလာတဲ့အခါ မရှကျသငျ့တာကို မရှကျပါနဲ့
လုပ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကို လုပ်ဖို့
ပုည ကြိယ ဝတ္တုဆယ်မျိုး
ကုသိုလ်ဆယ်မျိုး ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါ
၁။ ဒါန =
၂။ သီလ =
ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါးစသော
၃။ ဘာဝနာ =
တရားဓမ္မ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခြင်း။
၄။ အပစာယန =
အသက်သိက္ခာ ဂုဏ်ဝါ ကြီးသူအား
၅။ ဝေယျာဝစ္စ =
၆။ ပတ်တိဒါန =
၇။ ပတ္တာနုမောဒန =
ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ယူခြင်း။
၈။ ဓမ်မဿဝန =
၉။ ဓမ္မဒေသနာ =
လာဘ်လာဘကို မငဲ့ဘဲ တရားဟောပြောခြင်း။
၁ဝ။ ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ =
ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်စွာ ပြုခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ လုပ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကို
ဘာမှ မလုပ်တာထက် စာရင်
ဒီမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆယ်မျိုးထဲမှာ
လုပ်လို့ရတဲ့ ကုသိုလ်တွေ အများကြီးပါ။
လုပျနိုငျတဲ့ ကုသိုလျမြိုးကို လုပျဖို့
ပုည ကွိယ ဝတ်တုဆယျမြိုး
ကုသိုလျဆယျမြိုး ရှိကွောငျး ဖျောပွထားပါ
ငါးပါး၊ ရှဈပါး၊ ဆယျပါးစသော
တရားဓမ်မ ကငျြ့ကွံ အားထုတျခွငျး။
အသကျသိက်ခာ ဂုဏျဝါ ကွီးသူအား
၅။ ဝယြောဝစ်စ =
၆။ ပတျတိဒါန =
၇။ ပတ်တာနုမောဒန =
ဝမျးမွောကျ ဝမျးသာ သာဓုချေါယူခွငျး။
၈။ ဓမျမဿဝန =
၉။ ဓမ်မဒသေနာ =
လာဘျလာဘကို မငဲ့ဘဲ တရားဟောပွောခွငျး။
၁ဝ။ ဒိဋ်ဌိဇုကမ်မ =
ဖွောငျ့မတျ မှနျကနျစှာ ပွုခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
မိမိတို့ လုပျနိုငျတဲ့ ကုသိုလျမြိုးကို
ဘာမှ မလုပျတာထကျ စာရငျ
ဒီမှာ ဖျောပွထားတဲ့ ဆယျမြိုးထဲမှာ
လုပျလို့ရတဲ့ ကုသိုလျတှေ အမြားကွီးပါ။
“ခြှတျရခကျပွီး ဂြှတျတကျနတေဲ့ လညျပငျး ကခြေးတှကေို မိနဈ၂၀အတှငျး ပြောကျသှားစမေယျ့နညျး ”
ချွတ်ရခက်ပြီး ဂျွတ်တက်နေတဲ့ လည်ပင်း ကချေးတွေကို မိနစ်၂၀အတွင်း ပျောက်သွားစေမယ့်နည်း …
လည်ပင်း ၊ ဂုတ်မည်းခြင်းကတော်တော်ကြည့်ရဆိုးတဲ့ ကိစ္စပါ ။
ဖြူဝင်းနေမှ ကြည့်ကောင်းတာပါ ။
ချေးတွေ ကြောင့် လည်ပင်း ၊ဂုတ်တွေမည်းနေခြင်းက
အမြင်အားဖြင့်လည်း မတင့်တယ်လှပါဘူး ။
လည်ပင်းဖြူဖို့ နည်းတွေအမျိုးမျိုး ကြိုးစားပေမယ့်
နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးပါ့မယ် ။
မိနစ်၂၀တည်းနဲ့ မှော်ဆန်တဲ့ရလဒ်ကို ရသွားစေမှာပါ ။
ပါဝင်ပစ္စည်းကလည်း အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပါတယ် ။
Baking Soda – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
အုန်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ဖော်ပြထားသော
လည်ပင်း တဝိုက်သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ ။
၁၅မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာ ရေနွေးဖြင့်ဆေးကြောလိုက်ပါ ။
baking soda က အရေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို
ဖယ်ရှားပေးပြီး ဖြူဝင်းစေနိုင်ကာ အုန်းဆီကတော့
အရေပြားကို သဘာဝအတိုင်း စိုပြေမှု ပေးစွမ်းမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနည်းလမ်းကို တစ်ပါတ်လျှင် အနည်းဆုံး ၂ကြိမ်
လုပ်ပေးနိုင်ရင်တောင် ရက်သတ္တ ပါတ်ကြာတဲ့အခါမှာ
သိသိာသာ ကပ်နေတဲ့ ချေးတွေမရှိတော့ဘဲဖြူဝင်းလာစေ မှာပါ ။
ဖြူ ဝင်းတဲ့လည်တိုင် လေးတွေု ရရှိကြပါစေ။
ခြှတျရခကျပွီး ဂြှတျတကျနတေဲ့ လညျပငျး ကခြေးတှကေို မိနဈ၂၀အတှငျး ပြောကျသှားစမေယျ့နညျး …
လညျပငျး ၊ ဂုတျမညျးခွငျးကတျောတျောကွညျ့ရဆိုးတဲ့ ကိစ်စပါ ။
ဖွူဝငျးနမှေ ကွညျ့ကောငျးတာပါ ။
ခြေးတှေ ကွောငျ့ လညျပငျး ၊ဂုတျတှမေညျးနခွေငျးက
အမွငျအားဖွငျ့လညျး မတငျ့တယျလှပါဘူး ။
လညျပငျးဖွူဖို့ နညျးတှအေမြိုးမြိုး ကွိုးစားပမေယျ့
နညျးလမျးလေးကို မြှဝပေေးပါ့မယျ ။
မိနဈ၂၀တညျးနဲ့ မှျောဆနျတဲ့ရလဒျကို ရသှားစမှောပါ ။
ပါဝငျပစ်စညျးကလညျး အလှယျတကူ ရရှိနိုငျပါတယျ ။
Baking Soda – လကျဖကျရညျဇှနျး ၂ဇှနျး
အုနျးဆီ – လကျဖကျရညျဇှနျး ၂ဇှနျး
ဆား – လကျဖကျရညျဇှနျး ၃ဇှနျး
ပွုလုပျနညျး ပါဝငျပစ်စညျးတှကေို ဖျောပွထားသော
လညျပငျး တဝိုကျသုတျလိမျးလိုကျပါ ။
၁၅မိနဈခနျ့ကွာတဲ့အခါမှာ ရနှေေးဖွငျ့ဆေးကွောလိုကျပါ ။
baking soda က အရပွေားပျေါမှာရှိတဲ့ ဆဲလျသတှေကေို
ဖယျရှားပေးပွီး ဖွူဝငျးစနေိုငျကာ အုနျးဆီကတော့
အရပွေားကို သဘာဝအတိုငျး စိုပွမှေု ပေးစှမျးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ဒီနညျးလမျးကို တဈပါတျလြှငျ အနညျးဆုံး ၂ကွိမျ
လုပျပေးနိုငျရငျတောငျ ရကျသတ်တ ပါတျကွာတဲ့အခါမှာ
သိသိာသာ ကပျနတေဲ့ ခြေးတှမေရှိတော့ဘဲဖွူဝငျးလာစေ မှာပါ ။
ဖွူ ဝငျးတဲ့လညျတိုငျ လေးတှေု ရရှိကွပါစေ။
“ဆနျတှဝေယျထားတာကွာလာတဲ့နောကျ ပိုးထိုးကာ မညျးညဈလာပွီဆိုရငျ ဒီနညျးလမျးတှကေို စမျးကွညျ့ပါ”
ဆန်ပိုးထိုးခြင်း ပြသနာကို လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းတဲ့နည်း…..မိမိတို့နေအိမ်က ဆန် နှင့် ဆန်မှုန့်များ ပိုးတက်ခြင်း ပိုးထိုးခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်ရလေအောင် ဆန်ထဲသို့ ငရုပ်သီးအခြောက်/အကြွေစေ့/ကြက်သွန် နီ /ဖြူ နှင့် ကရဝေးရွက်များကို ထည့်ပေးထားခြင်းဖြင့် ဆန်နှင့်ဆန်မှုန့်များ ပိုးထိုးခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။
ဆနျပိုးထိုးခွငျး ပွသနာကို လှယျကူစှာ ဖွရှေငျးတဲ့နညျး…..မိမိတို့နအေိမျက ဆနျ နှငျ့ ဆနျမှုနျ့မြား ပိုးတကျခွငျး ပိုးထိုးခွငျးမြား မဖွဈပျေါရလအေောငျ ဆနျထဲသို့ ငရုပျသီးအခွောကျ/အကွှစေေ့/ကွကျသှနျ နီ /ဖွူ နှငျ့ ကရဝေးရှကျမြားကို ထညျ့ပေးထားခွငျးဖွငျ့ ဆနျနှငျ့ဆနျမှုနျ့မြား ပိုးထိုးခွငျးမှ ကငျးဝေးစပေါသညျ။
“ကိုယျ့ဆီမှာတငျနတေဲ့ ဝဋျကွှေးတှကေို အမွနျကစြေသေော နညျးလမျး”
ရွာတစ်ရွာမှာ လင်မယား နှစ်ယောက် ရှိတယ် ။ ယောက်ျားဟာ သိပ်ကို ကြမ်းတမ်းတဲ့ စရိုက်ရှိတဲ့ အတွက် တနေ့ တနေ့ သူ့မိန်းမကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ရိုက်တတ် ပါတယ် ။ယောင်္ကျားဟာ အလုပ်က ပြန်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ မျက်နှာက တည်တင်းလို့ မိန်းမကို ဘယ်လို အပြစ်ရှာရ မလဲဆိုတာပဲ တွေးနေတတ် ပါတယ် ။ အပြစ်ကလေး တခု တွေ့တာနဲ့ နီးရာ တုတ်စွဲပြီး ရိုက်နှက်တော့တာ ပါပဲ ။
မိန်းမကလည်း သူ့ယောက်ျားကို သိပ်ကြောက်ရ ပါတယ် ။ သူအိမ်ပြန်လာ တာနဲ့ အပြစ်ရယ်လို့ ရှာမတွေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် တစ်အိမ်လုံး ရေအိုးတွေကို ပြည့်အောင် ခပ် ၊ တခြံလုံး အမှိုက်တွေ ရှင်း ၊ ထမင်း ဟင်းတွေကိုလည်း အဆင်သင့် ခူးခပ်ပေးထား ပါတယ် ။ ဒါ့ပေမယ့် အပြစ် ကတော့ မလွတ်ပါဘူး ။
ထမင်းက သူပြန်မလာခင် စောစောလေး ကြိုခူးထားမိရင်လည်း “ ဒီလောက် အကြာကြီး က ထမင်းခူးထားတော့ ထမင်းတွေက အေးကုန်တာပေါ့ ၊ တနေကုန် ပင်ပန်းနေတာ ဒီထမင်း အအေးကြီး ငါက စားရမလား ၊ ဒီလောက်တောင် နားမလည်တဲ့ မိန်းမ ” ဆိုပြီး ထမင်း ပန်းကန်ကို မှောက်ပြစ်ပြီး တွေ့ကရာနဲ့ အမျိုးသမီးကို ရိုက်နှက်တော့တာပါပဲ ။
ယောက်ျား ပြန်လာခါနီးမှ အပြေးအလွှား ထမင်းခူးထား ပြန်တော့လည်း “ ယောက်ကျားက မောမော ပန်းပန်းနဲ့ ပြန်လာတာ ဒီထမင်း အပူကြီး စားပြီး ငါ့ကို သေစေချင်လို့လား ” ဆိုပြီး ရိုက်ပြန်တာ ပါပဲ ။ မိန်းမခမျာလည်း သူ့ယောက်ျားက ဘယ်လောက်ပဲ ရိုက်ရိုက် သံယောဇဉ်ကလည်း မကုန်နိုင်၊ စိတ်ကလည်း မပြတ်နိုင်၊ နေ့စဉ် ရိုက်နှက်နှိပ်စက်နေတဲ့ ဒါဏ်ကိုလည်း ခံရတာ သိပ်ကြောက်လှတာမို့ ဆုတ်လည်း ဆူး၊ စားလည်း ရူးဘဝနဲ့ နေ့စဉ် ယောက်ျား ပြန်လာခါနီးပြီ ဆိုရင် တုန်နေအောင် ကြောက်နေရ ရှာတော့တာပါပဲ ။
ပတ်ဝန်းကျင် ကတောင် မခံမရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်ကြရပါတယ် ။ ဒီလောက် နှိပ်စက်နေတဲ့ ယောက်ျား နင်ထား ခဲ့ပါတော့လား ဆိုလည်း မထားခဲ့နိုင်ပါဘူး ။ သူမ မပြတ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ကြံရာ မရတော့တဲ့အခါ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက ဆရာတော်ကြီးကို အကျိုး အကြောင်းသွားပြီး လျှောက်ရရှာပါတယ် ။ နောက်ဆုံး တော့လည်း အားကိုးရာက သံဃာရတနာပါပဲ ။ အကြောင်းစုံကို သိရတဲ့ အခါ ဆရာတော်ကြီးက မေးပါတယ် ။
“ ဒကာမရဲ့ ယောက်ျားက ဘယ်အချိန်တွေမှာ အရိုက် များတတ်သလဲ ” “ ရိုက်တာတော့ အချိန်တိုင်း လိုလိုပါပဲ ဘုရား ၊ ဒါပေမယ့် သူထမင်း စားခါနီးရင် ပိုပြီး ရိုက်တတ်ပါတယ် ဘုရား ” ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတော်ကြီးက အနီးအနားမှာ ရှိနေတဲ့ အုန်းလက်အရိုးတွေကို စုစည်းပြီး လုပ်ထားတဲ့ အုန်းတံမြက်စည်းကို ပေးပြီး “ ရော့ နင့်ယောက်ကျား ထမင်းစားဖို့ စားပွဲနားမှာ ထိုင်တာနဲ့ အဲဒီတံမြက်စည်းကို အနားမှာသာ ချထားပေးလိုက် ” ဒီလိုပဲ မိန့်ပြီး ဆရာတော်ကြီးက ကျက်သရေခန်းထဲကို ကြွဝင်သွားပါတော့တယ်။
အမျိုးသမီးခမျာလည်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိနားမလည်သော်လည်း အကြောင်းတော့ ရှိမှာပဲ ဆိုပြီး တံမြက်စည်းလေး ပိုက်လို့ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဆရာတော်ကြီး မိန့်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း သူ့ယောက်ကျား ထမင်း စားခါနီးလို့ အပြစ်တစ်ခုခုရှာတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ အမျိုးသမီးက တံမြက်စည်းလေးကို မသိမသာ အနားကို တိုးပးထားလိုက်တယ် ။
အမျိုးသားကလည်း အနားမှာ အစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ တံမြက်စည်းနဲ့ ကောက်ရိုက်တော့တာ ပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ့ တလလောက် ကြာလာတဲ့ အခါမှာ ….. အမျိုးသားရဲ့ ရိုက်ပုတ် နှိပ်စက်မှုတွေက တဖြည်းဖြည်း နည်းနည်းသွားပြီး နောက်ဆုံး လုံးဝ မရိုက်တော့ ပါဘူး ။
အမျိုးသမီးက စမ်းသပ်ကြည့်ပါတယ် ။ ထမင်းကို စားလို့ လုံးဝ မကောင်းအောင် ပျော့အောင် ချက်ကြည့်တယ် ၊ မနက်ကတည်းက ချက်ထားတဲ့ ထမင်းအေးကြီး ချကျွေးကြည့်တယ် ၊ ဘယ်လိုပဲ စမ်းစမ်း မရိုက်တော့ပါဘူး ။ ဒါနဲ့ပဲ နောက်ဆုံး အမျိုးသမီးက သူ့အမျိုးသားကိုပါ ခေါ်ပြီး ကျေးဇူးရှင် ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ကြီးထံ အကြောင်းစုံ သွားပြီးလျှောက်ထားတဲ့ အခါမှာတော့ …. ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ပါတယ် … “ အဲဒါ ဝဋ်ကြွေးကျေအောင် လုပ်ပေးလိုက်တာ” တဲ့ ။
ဆရာတော်ကြီး ဆက်ပြီး မိန့်တာက ” ဘုရားရှင် လက်ထက်တော် တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ဒကာတို့ ၊ ဒကာမတို့ ။ အတိတ်ဘဝက နွားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လင်ယောက်ကျားနဲ့ နွားရှင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတို့ အကြင်လင်မယားဖြစ် ပြန်လည် ဆုံကြတဲ့ အခါမှာ အတိတ်က နွားရှင် ဖြစ်ခဲ့စဉ်က နေ့စဉ် ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို နွားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသားက နေ့တိုင်း ရိုက်နှက်နေတာမို့ ဘုရားရှင်က အခု ဘုန်းကြီးပေးတဲ့ နည်းလေး ညွှန်ကြားပေးတော် မူခဲ့တယ် ။
တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ တစ်ချက်ခြင်း ရိုက်နေတော့ ဝဋ်ကြွေးက တော်တော်နဲ့ မကျေဘူးပေါ့ ။ အုန်းလက်ရိုး တံမြက်စည်းက တစ်ချောင်းကို အုန်းလက်ပေါင်း ရာချီပြီး စုစည်းထားတာမို့ တစ်ချက် ရိုက်တာနဲ့ အနည်းဆုံး အချက် ငါးဆယ်လောက် ကြေပါတယ် ။ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးလည်း ဒကာမက လာပြီး လျှောက်ထားတော့ ဘုရားပေးတဲ့ နည်းလေး အတိုင်းပဲ ပေးလိုက်တာပါ ။ ကဲ ခုတော့ ဝဋ်ကြွေးတွေလည်း ကျေသွားကြပြီမို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေကြပေရော့ ” ။
အဲဒီလောက်ပဲ မိန့်ပြီး ဆရာတော်ကြီးက ကျက်သရေခန်းထဲ ကြွဝင်သွား ပါတော့တယ် ။ကဲ စာဖတ်ပရိသတ်လည်းပဲ ဒီနည်းလေးကို နည်းယူပီး သုံးကြမယ် ဆိုရင်တော့ …..တခါတလေ ကိုယ့်မှာ အပြစ်မရှိပဲ အပြစ်တင်ခံရတဲ့ အခါ အပြစ်ပြန်ပီး မတင်ပါနဲ့ ။ ဝဋ်ကြွေး မကျေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ များများလေးသာ တင်ပါစေ ။ ဒါမှ ဝဋ်ကြွေး မြန်မြန် ကျေလိမ့်မယ် ။
ကိုယ် တန်ဖိုးအထားဆုံး ကိုယ့်သိက္ခာတရားကို ရစရာ မရှိအောင် နှိမ်ချတဲ့ စကားတွေ အပြောခံရတဲ့ အခါလည်း ကြုံရပါလိမ့်မယ် ။ ပြန်မပြောပါနဲ့ ။ ဝဋ်ကြွေး မကျေပဲ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ များများလေးသာ ပြောပါစေ ။ ဒါမှ ဝဋ်ကြွေး မြန်မြန် ကျေပါလိမ့်မယ် ။ ကိုယ်က ကျေးဇူးပြုဖူးသူက ကိုယ့်ကျေးဇူးကို အခါခါ စော်ကားတာမျိုးလည်း ကြုံရပါလိမ့်မယ် ။ ကျေးဇူးရှိလို့ ကျေးစွတ်တယ်လို့ မပြောလိုက်ပါနဲ့ ။ ဝဋ်ကြွေး မကျေပဲ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ များများလေးသာ စော်ကားပါစေ ။ ဒါမှ ဝဋ်ကြွေး မြန်မြန် ကျေပါလိမ့်မယ် ။
ရှာတဈရှာမှာ လငျမယား နှဈယောကျ ရှိတယျ ။ ယောကျြားဟာ သိပျကို ကွမျးတမျးတဲ့ စရိုကျရှိတဲ့ အတှကျ တနေ့ တနေ့ သူ့မိနျးမကို အကွောငျးမရှိ အကွောငျးရှာပွီး ရိုကျတတျ ပါတယျ ။ယောင်ျကြားဟာ အလုပျက ပွနျလာပွီ ဆိုတာနဲ့ မကျြနှာက တညျတငျးလို့ မိနျးမကို ဘယျလို အပွဈရှာရ မလဲဆိုတာပဲ တှေးနတေတျ ပါတယျ ။ အပွဈကလေး တခု တှတေ့ာနဲ့ နီးရာ တုတျစှဲပွီး ရိုကျနှကျတော့တာ ပါပဲ ။
မိနျးမကလညျး သူ့ယောကျြားကို သိပျကွောကျရ ပါတယျ ။ သူအိမျပွနျလာ တာနဲ့ အပွဈရယျလို့ ရှာမတှနေို့ငျအောငျ ကွိုးစားပွီး အဆငျသငျ့ ဖွဈအောငျ တဈအိမျလုံး ရအေိုးတှကေို ပွညျ့အောငျ ခပျ ၊ တခွံလုံး အမှိုကျတှေ ရှငျး ၊ ထမငျး ဟငျးတှကေိုလညျး အဆငျသငျ့ ခူးခပျပေးထား ပါတယျ ။ ဒါ့ပမေယျ့ အပွဈ ကတော့ မလှတျပါဘူး ။
ထမငျးက သူပွနျမလာခငျ စောစောလေး ကွိုခူးထားမိရငျလညျး “ ဒီလောကျ အကွာကွီး က ထမငျးခူးထားတော့ ထမငျးတှကေ အေးကုနျတာပေါ့ ၊ တနကေုနျ ပငျပနျးနတော ဒီထမငျး အအေးကွီး ငါက စားရမလား ၊ ဒီလောကျတောငျ နားမလညျတဲ့ မိနျးမ ” ဆိုပွီး ထမငျး ပနျးကနျကို မှောကျပွဈပွီး တှကေ့ရာနဲ့ အမြိုးသမီးကို ရိုကျနှကျတော့တာပါပဲ ။
ယောကျြား ပွနျလာခါနီးမှ အပွေးအလှား ထမငျးခူးထား ပွနျတော့လညျး “ ယောကျကြားက မောမော ပနျးပနျးနဲ့ ပွနျလာတာ ဒီထမငျး အပူကွီး စားပွီး ငါ့ကို သစေခေငျြလို့လား ” ဆိုပွီး ရိုကျပွနျတာ ပါပဲ ။ မိနျးမခမြာလညျး သူ့ယောကျြားက ဘယျလောကျပဲ ရိုကျရိုကျ သံယောဇဉျကလညျး မကုနျနိုငျ၊ စိတျကလညျး မပွတျနိုငျ၊ နစေ့ဉျ ရိုကျနှကျနှိပျစကျနတေဲ့ ဒါဏျကိုလညျး ခံရတာ သိပျကွောကျလှတာမို့ ဆုတျလညျး ဆူး၊ စားလညျး ရူးဘဝနဲ့ နစေ့ဉျ ယောကျြား ပွနျလာခါနီးပွီ ဆိုရငျ တုနျနအေောငျ ကွောကျနရေ ရှာတော့တာပါပဲ ။
ပတျဝနျးကငျြ ကတောငျ မခံမရပျနိုငျအောငျ ဖွဈကွရပါတယျ ။ ဒီလောကျ နှိပျစကျနတေဲ့ ယောကျြား နငျထား ခဲ့ပါတော့လား ဆိုလညျး မထားခဲ့နိုငျပါဘူး ။ သူမ မပွတျနိုငျပါဘူး ။ ဒါနဲ့ နောကျဆုံး ကွံရာ မရတော့တဲ့အခါ ရှာဦးဘုနျးတျောကွီးကြောငျးက ဆရာတျောကွီးကို အကြိုး အကွောငျးသှားပွီး လြှောကျရရှာပါတယျ ။ နောကျဆုံး တော့လညျး အားကိုးရာက သံဃာရတနာပါပဲ ။ အကွောငျးစုံကို သိရတဲ့ အခါ ဆရာတျောကွီးက မေးပါတယျ ။
“ ဒကာမရဲ့ ယောကျြားက ဘယျအခြိနျတှမှော အရိုကျ မြားတတျသလဲ ” “ ရိုကျတာတော့ အခြိနျတိုငျး လိုလိုပါပဲ ဘုရား ၊ ဒါပမေယျ့ သူထမငျး စားခါနီးရငျ ပိုပွီး ရိုကျတတျပါတယျ ဘုရား ” ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတျောကွီးက အနီးအနားမှာ ရှိနတေဲ့ အုနျးလကျအရိုးတှကေို စုစညျးပွီး လုပျထားတဲ့ အုနျးတံမွကျစညျးကို ပေးပွီး “ ရော့ နငျ့ယောကျကြား ထမငျးစားဖို့ စားပှဲနားမှာ ထိုငျတာနဲ့ အဲဒီတံမွကျစညျးကို အနားမှာသာ ခထြားပေးလိုကျ ” ဒီလိုပဲ မိနျ့ပွီး ဆရာတျောကွီးက ကကျြသရခေနျးထဲကို ကွှဝငျသှားပါတော့တယျ။
အမြိုးသမီးခမြာလညျး ဆရာတျောကွီးရဲ့ ရညျရှယျခကျြကို မသိနားမလညျသျောလညျး အကွောငျးတော့ ရှိမှာပဲ ဆိုပွီး တံမွကျစညျးလေး ပိုကျလို့ အိမျကို ပွနျလာခဲ့ပါတယျ ။ ဆရာတျောကွီး မိနျ့ခဲ့တဲ့ အတိုငျး သူ့ယောကျကြား ထမငျး စားခါနီးလို့ အပွဈတဈခုခုရှာတော့မယျ ဆိုတာနဲ့ အမြိုးသမီးက တံမွကျစညျးလေးကို မသိမသာ အနားကို တိုးပးထားလိုကျတယျ ။ အမြိုးသားကလညျး အနားမှာ အစဉျသငျ့ရှိနတေဲ့ တံမွကျစညျးနဲ့ ကောကျရိုကျတော့တာ ပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ့ တလလောကျ ကွာလာတဲ့ အခါမှာ ….. အမြိုးသားရဲ့ ရိုကျပုတျ နှိပျစကျမှုတှကေ တဖွညျးဖွညျး နညျးနညျးသှားပွီး နောကျဆုံး လုံးဝ မရိုကျတော့ ပါဘူး ။
အမြိုးသမီးက စမျးသပျကွညျ့ပါတယျ ။ ထမငျးကို စားလို့ လုံးဝ မကောငျးအောငျ ပြော့အောငျ ခကျြကွညျ့တယျ ၊ မနကျကတညျးက ခကျြထားတဲ့ ထမငျးအေးကွီး ခကြှေးကွညျ့တယျ ၊ ဘယျလိုပဲ စမျးစမျး မရိုကျတော့ပါဘူး ။ ဒါနဲ့ပဲ နောကျဆုံး အမြိုးသမီးက သူ့အမြိုးသားကိုပါ ချေါပွီး ကြေးဇူးရှငျ ရှာဦးကြောငျး ဆရာတျောကွီးထံ အကွောငျးစုံ သှားပွီးလြှောကျထားတဲ့ အခါမှာတော့ …. ဆရာတျောကွီးက မိနျ့ပါတယျ … “ အဲဒါ ဝဋျကွှေးကအြေောငျ လုပျပေးလိုကျတာ” တဲ့ ။
ဆရာတျောကွီး ဆကျပွီး မိနျ့တာက ” ဘုရားရှငျ လကျထကျတျော တုနျးကလညျး ဒီလိုပဲ ဒကာတို့ ၊ ဒကာမတို့ ။ အတိတျဘဝက နှားဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ လငျယောကျကြားနဲ့ နှားရှငျဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ အမြိုးသမီးတို့ အကွငျလငျမယားဖွဈ ပွနျလညျ ဆုံကွတဲ့ အခါမှာ အတိတျက နှားရှငျ ဖွဈခဲ့စဉျက နစေ့ဉျ ရိုကျနှကျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးကို နှားဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ အမြိုးသားက နတေို့ငျး ရိုကျနှကျနတောမို့ ဘုရားရှငျက အခု ဘုနျးကွီးပေးတဲ့ နညျးလေး ညှနျကွားပေးတျော မူခဲ့တယျ ။
တုတျတဈခြောငျးနဲ့ တဈခကျြခွငျး ရိုကျနတေော့ ဝဋျကွှေးက တျောတျောနဲ့ မကဘြေူးပေါ့ ။ အုနျးလကျရိုး တံမွကျစညျးက တဈခြောငျးကို အုနျးလကျပေါငျး ရာခြီပွီး စုစညျးထားတာမို့ တဈခကျြ ရိုကျတာနဲ့ အနညျးဆုံး အခကျြ ငါးဆယျလောကျ ကွပေါတယျ ။ဒါကွောငျ့ ဘုနျးကွီးလညျး ဒကာမက လာပွီး လြှောကျထားတော့ ဘုရားပေးတဲ့ နညျးလေး အတိုငျးပဲ ပေးလိုကျတာပါ ။
ကဲ ခုတော့ ဝဋျကွှေးတှလေညျး ကသြှေားကွပွီမို့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ နကွေပရေော့ ” ။အဲဒီလောကျပဲ မိနျ့ပွီး ဆရာတျောကွီးက ကကျြသရခေနျးထဲ ကွှဝငျသှား ပါတော့တယျ ။ကဲ စာဖတျပရိသတျလညျးပဲ ဒီနညျးလေးကို နညျးယူပီး သုံးကွမယျ ဆိုရငျတော့ …..တခါတလေ ကိုယျ့မှာ အပွဈမရှိပဲ အပွဈတငျခံရတဲ့ အခါ အပွဈပွနျပီး မတငျပါနဲ့ ။ ဝဋျကွှေး မကဖြွေဈပါလိမျ့မယျ ။ မြားမြားလေးသာ တငျပါစေ ။ ဒါမှ ဝဋျကွှေး မွနျမွနျ ကလြေိမျ့မယျ ။
ကိုယျ တနျဖိုးအထားဆုံး ကိုယျ့သိက်ခာတရားကို ရစရာ မရှိအောငျ နှိမျခတြဲ့ စကားတှေ အပွောခံရတဲ့ အခါလညျး ကွုံရပါလိမျ့မယျ ။ ပွနျမပွောပါနဲ့ ။ ဝဋျကွှေး မကပြေဲ ရှိပါလိမျ့မယျ ။ မြားမြားလေးသာ ပွောပါစေ ။ ဒါမှ ဝဋျကွှေး မွနျမွနျ ကပြေါလိမျ့မယျ ။ ကိုယျက ကြေးဇူးပွုဖူးသူက ကိုယျ့ကြေးဇူးကို အခါခါ စျောကားတာမြိုးလညျး ကွုံရပါလိမျ့မယျ ။ ကြေးဇူးရှိလို့ ကြေးစှတျတယျလို့ မပွောလိုကျပါနဲ့ ။ ဝဋျကွှေး မကပြေဲ ရှိပါလိမျ့မယျ ။ မြားမြားလေးသာ စျောကားပါစေ ။ ဒါမှ ဝဋျကွှေး မွနျမွနျ ကပြေါလိမျ့မယျ ။
“ဝကျခွံအမြိုးအစား (၆) မြိုးနဲ့ ဝကျခွံတှေ ပေါကျရတဲ့ အကွောငျးအရငျး”
ဝက်ခြံဟာ ပေါက်တဲ့အမျိုးအစား (၂) မျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါကို ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်မဖြစ်ပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ခွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေ ခွဲလို့ရလည်းဆိုတော့ မရောင်ရမ်းတဲ့ ဝက်ခြံနဲ့ ရောင်ရမ်းနေတဲ့ ဝက်ခြံ ဆိုပြီး ခွဲလို့ရပါတယ်။ ရောင်ရမ်းနေတဲ့ ဝက်ခြံဟာ တော်တော်ကို ခံရခက်ပြီး အခြေအနေ ဆိုးလာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်သင့်ပါတယ်။
အဆီဖု=ဒီအဖုလေးတွေဟာ ပတ်ပတ်လည်မှာ အနီရောင် အစက်ကလေးတွေနဲ့ ဝန်းရံပြီးတော့ ပေါက်လေ့ ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ အဖြူရောင် ဗဟိုရှိပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း အဖြူရောင် အစက်လေးတွေအဖြစ် တွေ့ရတတ်ပါတယ်။သူဟာ မွေးညှင်းလေးတွေ-ဆံပင်လေး
တွေ ကြားထဲမှာ ပေါက်ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေလည်း အတွင်းထဲမှာ ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းများ – အညစ်အကြေးများ အဆီအဆီနှင့် ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေသော အရေပြားဆဲလ်များကြောင့် ဒါတွေဟာ ချွေးပေါက်ထဲမှာ ပိတ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ဆားဝက်ခြံ=သူကတော့ မရောင်ရမ်းတဲ့ ဝက်ခြံကနေ ဖြစ်လာပြီးတော့ အမာရွတ်တွေလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ သူကတော့ ပုံမှန်အသားအရေနဲ့တူပြီး အလယ်မှာတော့ ညိုနေမဲနေတတ်ပါတယ်။
အကြောင်းရင်းများ – ဒါကတော့ ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်ရာကနေ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲ ချွေးပေါက်တွေ ကျယ်လာပြီး ဆံပင်ကျွတ်များ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံပုန်း=ဒါတွေကတော့ အရေပြားရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ ရောင်ရမ်းနေတဲ့ ဝက်ခြံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖုတွေ ထလာရင် အရေပြား အနီးတစ်ဝိုက် နီနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအဖုတွေ ကြီးလာရင်တော့ ပန်းရောင် ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
သူတို့ကို မလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ ဝက်ခြံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ အလယ်မှာ ဘာမှမဖြစ်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းများ – အရေပြားပိုးဝင်ခြင်း (Molluscum contagiosum)သွေးကြောငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း (cherry angioma)
– နှင်းခူ- ကြွက်နို့-ပြည်ဖု-ဒီဝက်ခြံတွေကတော့ အဝိုင်းပုံ ရှိပြီးတော့ အလယ်ဗဟိုက ပျော့စိစိ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အထဲမှာလည်း အနီရောင် (သို့) အဖြူရောင် အရည်တွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းများ –
များသောအားဖြင့် အစားအစာ (သို့) ပတ်ဝန်းကျင်-ဓာတ်မတည့်မှုကနေ ဖြစ်စေပါတယ်။ပိုးကိုက်ခံရခြင်း (အဆိပ်ပြင်းခြင်း)အရေပြားဟာ ဆဲလ်သေတွေ နှင့် အဆီတွေ ပိတ်ဆို့တဲ့ အခါမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆင်ဝက်ခြံ=သူတို့ဟာ အရေပြားရဲ့ နက်နက်ရှိူင်းရှိုင်းနေရာမှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီးတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်း ခံစားရပါတယ်။ ပြီးတော့ အမာရွတ်နဲ့ အမဲစက်လိုမျိုး အရေပြားပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
အကြောင်းအရင်းများ – ဒီဝက်ခြံတွေကို ရောင်ရမ်းသော ဝက်ခြံလို့ ယူဆပြီး ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ချွေးပေါက်တွေဟာ အရေပြားမျက်နှာပြင်အောက်ရှိ နက်ရှိုင်းသော ဆဲလ်များနှင့် တစ်သျှူးများကို ပျက်စီးစေတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံဖု (ပြည်ရှိ)=ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ pustules ပိုးတွေ ကူးစက်ခံရတဲ့အခါမှာ အရင်ဆုံးအရေပြားက နာကျင်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖုလေးပေါက်လာပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးလာပါတယ်။ ဝက်ခြံဟာ အနီရောင်ရှိပြီးတော့ ဘေးနားမှာလည်း အဖုသေးသေးလေးတွေ
အများကြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အထဲမှာလည်း ပြည်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ လူကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုက်ခဲစေပါတယ်။ ပျောက်သွားရင်လည်း အမာရွတ် အမဲကြီးတွေ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်း – ကူးစက်ခံရသော pustules=credit
အဆီဖု=ဒီအဖုလေးတှဟော ပတျပတျလညျမှာ အနီရောငျ အစကျကလေးတှနေဲ့ ဝနျးရံပွီးတော့ ပေါကျလေ့ ရှိပါတယျ။ သူ့မှာ အဖွူရောငျ ဗဟိုရှိပွီးတော့ တဈခါတဈလမှောလညျး အဖွူရောငျ အစကျလေးတှအေဖွဈ တှရေ့တတျပါတယျ။သူဟာ မှေးညှငျးလေးတှေ-ဆံပငျလေး
တှေ ကွားထဲမှာ ပေါကျပွီးတော့ တဈခါတဈလလေညျး အတှငျးထဲမှာ ပေါကျနတေတျပါတယျ။အကွောငျးရငျးမြား – အညဈအကွေးမြား အဆီအဆီနှငျ့ ခြှေးပေါကျမြားကို ပိတျဆို့စသေော အရပွေားဆဲလျမြားကွောငျ့ ဒါတှဟော ခြှေးပေါကျထဲမှာ ပိတျပွီး ဖွဈပျေါလာတာပါ။
ဆားဝကျခွံ=သူကတော့ မရောငျရမျးတဲ့ ဝကျခွံကနေ ဖွဈလာပွီးတော့ အမာရှတျတှလေညျး ဖွဈစပေါတယျ။ သူကတော့ ပုံမှနျအသားအရနေဲ့တူပွီး အလယျမှာတော့ ညိုနမေဲနတေတျပါတယျ။
အကွောငျးရငျးမြား – ဒါကတော့ ခြှေးပေါကျတှေ ပိတျရာကနေ ဖွဈလာတာမဟုတျပဲ ခြှေးပေါကျတှေ ကယျြလာပွီး ဆံပငျကြှတျမြား ပိတျဆို့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈရတဲ့ လက်ခဏာတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဝကျခွံပုနျး=ဒါတှကေတော့ အရပွေားရဲ့အောကျမှာရှိတဲ့ ရောငျရမျးနတေဲ့ ဝကျခွံတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအဖုတှေ ထလာရငျ အရပွေား အနီးတဈဝိုကျ နီနတေတျပါတယျ။ ဒီအဖုတှေ ကွီးလာရငျတော့ ပနျးရောငျ ပွောငျးသှားတတျပါတယျ။
သူတို့ကို မလောငျကြှမျးနိုငျတဲ့ ဝကျခွံနဲ့ ယှဉျကွညျ့ရငျတော့ အလယျမှာ ဘာမှမဖွဈတာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။အကွောငျးရငျးမြား – အရပွေားပိုးဝငျခွငျး (Molluscum contagiosum)သှေးကွောငယျမြား ဖှံ့ဖွိုးခွငျး (cherry angioma)
– နှငျးခူ- ကွှကျနို့-ပွညျဖု-ဒီဝကျခွံတှကေတော့ အဝိုငျးပုံ ရှိပွီးတော့ အလယျဗဟိုက ပြော့စိစိ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ အထဲမှာလညျး အနီရောငျ (သို့) အဖွူရောငျ အရညျတှနေဲ့ ပွညျ့နတေတျပါတယျ။အကွောငျးရငျးမြား –
မြားသောအားဖွငျ့ အစားအစာ (သို့) ပတျဝနျးကငျြ-ဓာတျမတညျ့မှုကနေ ဖွဈစပေါတယျ။ပိုးကိုကျခံရခွငျး (အဆိပျပွငျးခွငျး)အရပွေားဟာ ဆဲလျသတှေေ နှငျ့ အဆီတှေ ပိတျဆို့တဲ့ အခါမှာလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
ဆငျဝကျခွံ=သူတို့ဟာ အရပွေားရဲ့ နကျနကျရှိူငျးရှိုငျးနရောမှာ ပေါကျလရှေိ့ပွီးတော့ ပွငျးပွငျးထနျထနျလညျး ခံစားရပါတယျ။ ပွီးတော့ အမာရှတျနဲ့ အမဲစကျလိုမြိုး အရပွေားပွဿနာတှကေိုလညျး ဖွဈစပေါတယျ။
အကွောငျးအရငျးမြား – ဒီဝကျခွံတှကေို ရောငျရမျးသော ဝကျခွံလို့ ယူဆပွီး ပိတျဆို့နတေဲ့ ခြှေးပေါကျတှဟော အရပွေားမကျြနှာပွငျအောကျရှိ နကျရှိုငျးသော ဆဲလျမြားနှငျ့ တဈသြှူးမြားကို ပကျြစီးစတောကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဝကျခွံဖု (ပွညျရှိ)=ဝကျခွံဖွဈစတေဲ့ pustules ပိုးတှေ ကူးစကျခံရတဲ့အခါမှာ အရငျဆုံးအရပွေားက နာကငျြလာပါတယျ။ ပွီးတော့ အဖုလေးပေါကျလာပွီး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကွီးလာပါတယျ။ ဝကျခွံဟာ အနီရောငျရှိပွီးတော့ ဘေးနားမှာလညျး အဖုသေးသေးလေးတှေ
အမြားကွီး ရှိနတေတျပါတယျ။ အထဲမှာလညျး ပွညျရညျတှနေဲ့ပွညျ့နပွေီးတော့ လူကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ကိုကျခဲစပေါတယျ။ ပြောကျသှားရငျလညျး အမာရှတျ အမဲကွီးတှေ ကနျြနခေဲ့ပါတယျ။အကွောငျးရငျး – ကူးစကျခံရသော pustules=credit
“ဝမျးခြုပျတတျသူမြားအတှကျ လှယျကူထိရောကျတဲ့ နညျးလမျးကောငျးမြား”
( ၁ ) နံနက်အိပ်ရာထ သောက်ရေ နှစ်ခွက် ဆက်တိုက် သောက်ပေးခြင်းက အူတွေကို အလုပ်လုပ် စေလို့ ဝမ်းသွားစေပါတယ် ။ ( နေ့စဉ် ရေရှစ်ခွက်မှ ၁၀-ခွက်အထိ သောက်တဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူပါ ) ။ ( ၂ ) သံပရာသီး ကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှ သက်သာစေလို့ နံနက်အိပ်ရာထ အစာမစားခင်မှာ ရေ နွေး တစ်ဖန်ခွက်ထဲကို သံပရာသီး တစ်လုံး ညှစ်ပြီး ၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းနဲ့ ဆား အနည်းငယ် ဖျော်၍ သောက်ပါ ။
( ၃ ) ပဲသီး ၊ ဟင်းနုနယ် စတဲ့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များနဲ့ လိမ္မော်သီး ၊ သစ်တော်သီးကဲ့ သို့ အရည်ရွှမ်းပြီး အမျှင်များတဲ့ သစ်သီးများ စားပါ ။ ( ၄ ) အမျှင်ဓာတ် ပေါများသော ဂုန်လျှော်စေ့က အစာကြေစေပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေ ပါတယ် ။ ( ၅ ) နွားနို့ပူပူ သောက်ခြင်းက အူမကြီးကို ကောင်းစွာ လှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့် ဝမ်းမချုပ်စေ တော့ပါဘူး ( သို့မဟုတ် ) ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး နွားနို့ ပူပူထဲမှာ ထောပတ်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ် ဇွန်း ပမာဏ ခပ်၍ သောက်ခြင်းဖြင့် နံနက်ပိုင်း ရှောရှောရှုရှု ဝမ်းသက် စေပါတယ် ။
( ၆ ) နံနက်စောစော ( ၁၅ ) မိနစ်ခန့် လမ်းသွက်သွက် လျှောက်ခြင်းက အူများကို လှုပ်ရှားကာ ဝမ်းသွား စေပါတယ် ။ ( ၇ ) သဖန်းသီး ၊ ပဲကတ္တီပါ ၊ မြေပဲ ၊ စွန်ပလွန်သီး၊ ပဲပင်ပေါက် စားပေးပါ ။ မာလကာသီး (အူနီ) အမှည့်ကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ် ။ ( ၈ ) ကြံရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ beet root ( ခေါ် ) သကြား မုန်လာဥ ( ခေါ် ) သွေးရောင်ကဲ့သို့ မုန်လာဥနီ အလုံးတို့ကလည်း ဝမ်းသက်စေလို့ စားပေးပါ။
( ၉ ) နံနက်တိုင်း သင်္ဘောသီး မှည့်မှည့် စားပါ ။ ( ၁၀ ) ပန်းသီးကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ အတွက် တစ်နေ့နှစ်လုံး မှန်မှန် စားသင့်ပါတယ် ။ ( ၁၁ ) အရွက်မှာ အမွေးလေးတွေ ပါတဲ့ ကုလားမြင်းခွာ ရွက်ပင်၏ အပွင့်ကို သကြားနဲ့ ကြိတ်၍ စားပါ ။ ( ၁၂ ) ကြက်ဟင်းခါးသီးကို သောက်ရေ ၊ ဆားတို့နဲ့ စိမ်ပြီး သောက်ပါ ။
( ၁၃ ) ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ရေနံဆီဖြင့် စိမ်၍ ဝမ်းဗိုက်ကို လိမ်းပေးပါ ။ ( ၁၄ ) ကြိတ်မှန်ရွက် ( ၂၅ ) ကျပ်သားကို ထန်းလျက် ၁၀-ကျပ်သား ၊ အရည်ညှစ်ပြီးသော ရှောက်သီးဖတ် ၁၀- ကျပ်သား၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီ ၁၀-ကျပ်သား၊ စမုံမျိုးငါးပါးကို အမှုန့်နှစ်ပဲ၊ စားဆီတို့ဖြင့် ရောချက်ထားသော ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ် စားပေးပါ ။
( ၁ ) နံနကျအိပျရာထ သောကျရေ နှဈခှကျ ဆကျတိုကျ သောကျပေးခွငျးက အူတှကေို အလုပျလုပျ စလေို့ ဝမျးသှားစပေါတယျ ။ ( နစေ့ဉျ ရရှေဈခှကျမှ ၁၀-ခှကျအထိ သောကျတဲ့အကငျြ့ကို မှေးမွူပါ ) ။ ( ၂ ) သံပရာသီး ကလညျး ဝမျးခြုပျခွငျးမှ သကျသာစလေို့ နံနကျအိပျရာထ အစာမစားခငျမှာ ရေ နှေး တဈဖနျခှကျထဲကို သံပရာသီး တဈလုံး ညှဈပွီး ၊ ပြားရညျ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးနဲ့ ဆား အနညျးငယျ ဖြျော၍ သောကျပါ ။
( ၃ ) ပဲသီး ၊ ဟငျးနုနယျ စတဲ့ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ မြားနဲ့ လိမ်မျောသီး ၊ သဈတျောသီးကဲ့ သို့ အရညျရှမျးပွီး အမြှငျမြားတဲ့ သဈသီးမြား စားပါ ။ ( ၄ ) အမြှငျဓာတျ ပေါမြားသော ဂုနျလြှျောစကေ့ အစာကွစေပွေီး ဝမျးခြုပျခွငျးကို သကျသာ ပြောကျကငျးစေ ပါတယျ ။ ( ၅ ) နှားနို့ပူပူ သောကျခွငျးက အူမကွီးကို ကောငျးစှာ လှုံ့ဆျောပေးတာကွောငျ့ ဝမျးမခြုပျစေ တော့ပါဘူး ( သို့မဟုတျ ) ညအိပျရာဝငျခါနီး နှားနို့ ပူပူထဲမှာ ထောပတျကို လကျဖကျရညျဇှနျးတဈ ဇှနျး ပမာဏ ခပျ၍ သောကျခွငျးဖွငျ့ နံနကျပိုငျး ရှောရှောရှုရှု ဝမျးသကျ စပေါတယျ ။
( ၆ ) နံနကျစောစော ( ၁၅ ) မိနဈခနျ့ လမျးသှကျသှကျ လြှောကျခွငျးက အူမြားကို လှုပျရှားကာ ဝမျးသှား စပေါတယျ ။ ( ၇ ) သဖနျးသီး ၊ ပဲကတ်တီပါ ၊ မွပေဲ ၊ စှနျပလှနျသီး၊ ပဲပငျပေါကျ စားပေးပါ ။ မာလကာသီး (အူနီ) အမှညျ့ကလညျး ဝမျးခြုပျခွငျးကို သကျသာစပေါတယျ ။ ( ၈ ) ကွံရညျ၊ ခရမျးခဉျြသီးနဲ့ beet root ( ချေါ ) သကွား မုနျလာဥ ( ချေါ ) သှေးရောငျကဲ့သို့ မုနျလာဥနီ အလုံးတို့ကလညျး ဝမျးသကျစလေို့ စားပေးပါ။
( ၉ ) နံနကျတိုငျး သင်ျဘောသီး မှညျ့မှညျ့ စားပါ ။ ( ၁၀ ) ပနျးသီးကလညျး ဝမျးခြုပျခွငျးကို ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ အတှကျ တဈနနှေ့ဈလုံး မှနျမှနျ စားသငျ့ပါတယျ ။ ( ၁၁ ) အရှကျမှာ အမှေးလေးတှေ ပါတဲ့ ကုလားမွငျးခှာ ရှကျပငျ၏ အပှငျ့ကို သကွားနဲ့ ကွိတျ၍ စားပါ ။ ( ၁၂ ) ကွကျဟငျးခါးသီးကို သောကျရေ ၊ ဆားတို့နဲ့ စိမျပွီး သောကျပါ ။
( ၁၃ ) ကွကျဟငျးခါးသီးကို ရနေံဆီဖွငျ့ စိမျ၍ ဝမျးဗိုကျကို လိမျးပေးပါ ။ ( ၁၄ ) ကွိတျမှနျရှကျ ( ၂၅ ) ကပျြသားကို ထနျးလကျြ ၁၀-ကပျြသား ၊ အရညျညှဈပွီးသော ရှောကျသီးဖတျ ၁၀- ကပျြသား၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကွကျသှနျနီ ၁၀-ကပျြသား၊ စမုံမြိုးငါးပါးကို အမှုနျ့နှဈပဲ၊ စားဆီတို့ဖွငျ့ ရောခကျြထားသော ကွိတျမှနျရှကျယိုကို လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးခနျ့ တဈနေ့ သုံးကွိမျ စားပေးပါ ။
“လူပိနျခငျြတာမြိုး မဟုတျပဲ ဗိုကျခေါကျအဆီ-ခါးဆီ-ကြောဆီလို အဆီပိုတှပေဲ ကခြငျြတယျ ဆိုသူမြားအတှကျ ဆေးနညျးကောငျး”
အချိန်မကုန် လွယ်ကူသက်သာတဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့တော့ ဇွဲရှိရှိ လုပ်ရပါမယ်။-ပါဝင်ပစ္စည်း များကတော့-သံပုရာသီး တစ္လုံး-ဂျင်း လက် တစ်ဆစ်ခန့် နဲ့-ပျားရည် ၂ ဇွန်းခန့်
ပထမဆုံး သံပုရာသီး နဲ့ဂျင်းလက် တစ်ဆစ်ကို အခွံမခွါပဲ ရေစင်စင် ဆေးပါပြီးလျှင် နှစ်မျိုးလုံးကို အကွင်းလိုက် ပါးပါးလေး လှီးပေးပါ။ကော်ဖီ တစ်ခွက်စာ အဖုံးပါသော ကြွေ သို့ဖန်ခွက် တစ်ခွက်ထဲသို့ထည့်ပြီး
ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းထည့်ပါပြီးရင် ရေနွေးဆူဆူ (လက်ဖက်ခြောက်မပါ ရိုးရိုးရေနွေး) လောင်းထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပေးပါ။နာရီဝက်ခန့်နေလျှင် ရေနွေးနွေးလေး အနေအထားမှာ ဇွန်းဖြင့် မွှေပေးပြီး
တစ်ခွက်လုံးသောက်ပါ။ အဖတ်တွေ ကို လွှင့်ပစ်ရပါမယ်။သတိထားရမှာကတော့ ညမအိပ်ခင် အစားအသောက် အကုန် စားပြီးချိန်နဲ့ နာရီဝက်ခန့်ခွါ ပြီး သောက် ရပါမယ်။ဒီရေနွေး သောက်ပြီး အစာ မစားတော့လျှင်
အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အနှစ်နှစ် အလအလ အဆီပိုတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အနည်းဆုံး ဆယ်ရက်ခန့်တော့ ပုံမှန် သောက်ကြည့်ပေးပါ။သိသာတယ်ဆို ဆက်သောက်ချင် လာပါလိမ့်မယ်။ သောက်တာ ရက် ၂၀ လောက်
ရှိပါပြီ သိသာပါတယ်။ညီမလေး တစ်ယောက်ဆီက ရတဲ့ နည်းကို ပြန်ပြီး မျှဝေပေးတာပါ။ သိသာလို့ လက်တို့လိုက် ပါတယ်နော်။နို့တိုက်မိခင်များ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိ အမျိုးသမီးများ မသောက်သင့်ပါဘူး။ လူနည်းစုအနေနဲ့
သောက်နေတုန်း အခန့်မသင့် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ ဖြစ်လာတာမျိုး Pressure ကျလာတယ် ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေတော့ ဆက်မသောက်သင့်ပါဘူးရှင်။ပျားရည်နဲ့ဂျင်း ပါဝင်တာကြောင့် သုံးမျိုးပေါင်းပြီး ထိန်းပေးသွားတယ်
လို့ထင်ပါတယ်။ သောက်တာကလည်း ညအချိန် ဖြစ်တော့ အစာတွေ ရှိနေပြီလေ အစာအိမ်ကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ အလွန်အကျွံ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတော့ ဖြူ မကြုံဖူးသေးပါဘူး။ကိုယ်လိုချင် သလောက် အတိုင်းအတာ
ရပြီ ဆိုရင် နေ့တိုင်းမသောက်ပဲ တစ်ပတ် မှာ ၃ ရက်လောက်ပဲ သောက်ပါရှင်။စရိတ်နည်းတဲ့ နည်းမို့လို့ ထိန်းညှိပြီး လိုသလို သုံးကြည့်ကြပေါ့။ပိုပြီး ထိရောက်ချင်ရင်တော့ ဒါလည်းသောက်မယ် လေ့ကျင့်ခန်းလည်း
လုပ်မယ် အစားလည်း အနည်းငယ် (အဆီများတဲ့ အစားအစာ) ရှောင်မယ်ဆို သိပ်ကို ထိရောက်မှာပါ။ဒါသောက်တာက အဆီပြင်တွေကို ပျော့ပျောင်းလာစေပြီး လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် ကျစ်လစ်လာမှာပါ =Credit- Daw A Phyu Yaung
အခြိနျမကုနျ လှယျကူသကျသာတဲ့ နညျးလမျး ဖွဈပမေယျ့ နညျးလမျးမှနျမှနျနဲ့တော့ ဇှဲရှိရှိ လုပျရပါမယျ။-ပါဝငျပစ်စညျး မြားကတော့-သံပုရာသီး တစ်လုံး-ဂငျြး လကျ တဈဆဈခနျ့ နဲ့-ပြားရညျ ၂ ဇှနျးခနျ့
ပထမဆုံး သံပုရာသီး နဲ့ဂငျြးလကျ တဈဆဈကို အခှံမခှါပဲ ရစေငျစငျ ဆေးပါပွီးလြှငျ နှဈမြိုးလုံးကို အကှငျးလိုကျ ပါးပါးလေး လှီးပေးပါ။ကျောဖီ တဈခှကျစာ အဖုံးပါသော ကွှေ သို့ဖနျခှကျ တဈခှကျထဲသို့ထညျ့ပွီး
ပြားရညျ ထမငျးစားဇှနျး ၂ ဇှနျးထညျ့ပါပွီးရငျ ရနှေေးဆူဆူ (လကျဖကျခွောကျမပါ ရိုးရိုးရနှေေး) လောငျးထညျ့ပွီး အဖုံးအုပျထားပေးပါ။နာရီဝကျခနျ့နလြှေငျ ရနှေေးနှေးလေး အနအေထားမှာ ဇှနျးဖွငျ့ မှပေေးပွီး
တဈခှကျလုံးသောကျပါ။ အဖတျတှေ ကို လှငျ့ပဈရပါမယျ။သတိထားရမှာကတော့ ညမအိပျခငျ အစားအသောကျ အကုနျ စားပွီးခြိနျနဲ့ နာရီဝကျခနျ့ခှါ ပွီး သောကျ ရပါမယျ။ဒီရနှေေး သောကျပွီး အစာ မစားတော့လြှငျ
အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အနှဈနှဈ အလအလ အဆီပိုတှေ ဖွဈတဲ့ အတှကျ အနညျးဆုံး ဆယျရကျခနျ့တော့ ပုံမှနျ သောကျကွညျ့ပေးပါ။သိသာတယျဆို ဆကျသောကျခငျြ လာပါလိမျ့မယျ။ သောကျတာ ရကျ ၂၀ လောကျ
ရှိပါပွီ သိသာပါတယျ။ညီမလေး တဈယောကျဆီက ရတဲ့ နညျးကို ပွနျပွီး မြှဝပေေးတာပါ။ သိသာလို့ လကျတို့လိုကျ ပါတယျနျော။နို့တိုကျမိခငျမြား နဲ့ ကိုယျဝနျရှိ အမြိုးသမီးမြား မသောကျသငျ့ပါဘူး။ လူနညျးစုအနနေဲ့
သောကျနတေုနျး အခနျ့မသငျ့ ဗိုကျအောငျ့ဗိုကျနာ ဖွဈလာတာမြိုး Pressure ကလြာတယျ ဆိုတဲ့ လူမြိုးတှတေော့ ဆကျမသောကျသငျ့ပါဘူးရှငျ။ပြားရညျနဲ့ဂငျြး ပါဝငျတာကွောငျ့ သုံးမြိုးပေါငျးပွီး ထိနျးပေးသှားတယျ
လို့ထငျပါတယျ။ သောကျတာကလညျး ညအခြိနျ ဖွဈတော့ အစာတှေ ရှိနပွေီလေ အစာအိမျကို မထိခိုကျနိုငျပါဘူး။ အလှနျအကြှံ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတော့ ဖွူ မကွုံဖူးသေးပါဘူး။ကိုယျလိုခငျြ သလောကျ အတိုငျးအတာ
ရပွီ ဆိုရငျ နတေို့ငျးမသောကျပဲ တဈပတျ မှာ ၃ ရကျလောကျပဲ သောကျပါရှငျ။စရိတျနညျးတဲ့ နညျးမို့လို့ ထိနျးညှိပွီး လိုသလို သုံးကွညျ့ကွပေါ့။ပိုပွီး ထိရောကျခငျြရငျတော့ ဒါလညျးသောကျမယျ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး
လုပျမယျ အစားလညျး အနညျးငယျ (အဆီမြားတဲ့ အစားအစာ) ရှောငျမယျဆို သိပျကို ထိရောကျမှာပါ။ဒါသောကျတာက အဆီပွငျတှကေို ပြော့ပြောငျးလာစပွေီး လကေ့ငျြ့ခနျးကွောငျ့ ကဈြလဈလာမှာပါ =Credit- Daw A Phyu Yaung